Ama-Deep Groove Ball Bearings Ahlanganiswe Ngamaqembu Abili - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Ama-Deep Groove Ball Bearings Ahlanganiswe Ngezingxenye ezimbili
Ama-Deep Groove Ball Bearings Ahlanganiswe izingxenye ezimbili
Izici zendawo ejulile yokubhola ibhola
I-deep groove ball bearing structure is elula, kulula ukuyisebenzisa, iyinhloko yokukhiqiza enkulu kunazo zonke, esetshenziswa kabanzi ekilasini lamabherethi. Isetshenziswa kakhulu ezimotweni, imishini yamakhaya, amathuluzi emishini, amabhomu, amaphampu, imishini yokulima, imishini yokugqoka, nezinye izindawo eziningi. Ukukhiqizwa kwalo kubangele okungaphezu kwezingu-70% kokukhishwa kwama-bearings, ukukhiqizwa okuphezulu kakhulu kwe-China, ukusetshenziselwa kakhulu kwezindleko ezishibhile ekilasini lamabherethi.
I-deep groove ball bearings yilona uhlobo oluvame kakhulu lwezingubo zokugubha. Amapulangwe e-ball groove ejulile ahlanganisa indandatho yangaphandle, indandatho yangaphakathi, iqoqo lezinsimbi zensimbi kanye neqoqo labagcini. I-groove deep ball bearing izinhlobo kukhona single futhi kabili irowu ezimbili, irowu elilodwa groove ejulile ibhola ethwele ikhodi hlobo 6, kabili irowu ezijulile groove ibhola bearing 4. Isakhiwo sayo kulula, kulula ukuyisebenzisa, yiyona ukukhiqiza evamile kakhulu, kakhulu basebenzisa i-class of bearings.
Ama-bear groove ball bearings ngokuyinhloko alawulwa imithwalo yemisebe futhi angathwala kokubili imithwalo yama-radial and axial. Uma kutholakala kuphela ngemithwalo yemisebe yomsindo, i-angle yokuxhumana i-zero. Lapho ama-ball bearing ajulile enezikhala ezinkulu, ephethe ukuxhumana okungaxhunyiwe, angakwazi ukumelana nomthwalo omkhulu we-axial, i-groove ball ebhekene ne-coefficient encane kakhulu, ijubane lokulinganisa liphakeme kakhulu.
I-deep groove ball bearing structure is elula, uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo ezilula ukufeza ukunemba okuphakeme kokukhiqiza, kulula kangaka ukuba uchungechunge lokukhiqiza okuningi, izindleko zokukhiqiza ziphansi, ukusetshenziswa okujwayelekile kakhulu. I-deep groove ball bearings ngaphezu kohlobo oluyisisekelo, kunezinhlobonhlobo zesakhiwo ezihlukile, njenge: ngothuli lokumboza izigqoko zebhola ezijulile, izigxobo zenjoloba ezinamabhola amakhulu amabhola, ama-groove groove amabhola amabhethri, igebe yebhola yomthwalo omkhulu umthamo wezintaba ezijulile ze-ball bearingings, i-double bear line groove ball bearings
Ama-bear groove ball bearings angasetshenziselwa amabhokisi amagoli, izinto zokusebenza, amabhomu, izinto ezisendlini, izinjini zangaphakathi zomlilo, izimoto zethrafikhi, imishini yezolimo, imishini yokwakha, imishini yokwakha, yo-yo.
Ukulandelela i-Roller Bearings Sebenzisa Izici